Mbipụta akwụkwọ - Shanghai Comi Aroma Co., Ltd.
N'ikpeazụ, mpempe ikpeazụ nke ihe mgbagwoju anya nke ahụ bụ anya gị pụrụ iche bụ otu esi ebipụta akara aha gị na ngwaahịa gị na nkwakọ ngwaahịa gị. N'ebe a, anyị na-enye ọtụtụ nhọrọ, gụnyere silk screening, dechapụ mbipụta, HTL / Okpomọkụ Nyefee Label, na-ekpo ọkụ stamping, laser etching. Anyị na-enye ọrụ iji hazie igbe ndị e biri ebi maka mkpa nkwakọ ngwaahịa gị.
Y’oburu n’ichoro ka ihe ndia ghari, ndi okacha amara anyi nwere ike inye aka duzie gi. Kpọtụrụ anyị
Nyocha silk bụ usoro nke ink na-agbanye site na ihuenyo eserese na-ese foto n'elu. A na-etinye otu agba n'otu oge, yana otu ihuenyo maka otu agba. Onu ogugu agba a choro choro uzo ole achoro maka ebi ebi nke silk. Nwere ike ịnwe mmetụta nke eserese ebipụtara na elu mma.
OFFSET ebi akwụkwọ
Offset printing na-eji efere efere iji nyefee ink n'elu akpa ndị ahụ Usoro a dị nkenke karịa mbipụta silkscreen ma ọ dị irè maka ọtụtụ agba (ihe ruru 8 agba) na ihe osise halftone. Usoro a dị maka naanị tubes. Gaghị enwe mmetụta nke eserese ebipụtara mana enwere akara agba na-enweghị atụ na ọkpọkọ ahụ.